Home News DFS oo war kasoo saartay duqeeyn lagu dilay dagaalamayaal Al-shabaab
DFS oo war kasoo saartay duqeeyn lagu dilay dagaalamayaal Al-shabaab
War Saxaafadeed kasoo baxay Wasaarada Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya ayaa lagu faah faahiyay duqeymo diyaaradaha dagaalka dalka Mareykanka ka fuliyeen deegaan katirsan gobolka Mudug.
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkan dhinaca cirka lagu dilay Saraakiil iyo dagaalyahano katirsan Al Shabaab, waxa ayna dowlada xustay in duqeyntaasi aysan wax khasaaro ah kasoo gaarin dad shacab ah.
Halka ka Akhriso War Saxaafadeedka dowlada kasoo baxay
“Ciidamada Qaranka oo taageero Ka helay Ciidamada Maraykanka ayaa weerar qorshaysan Ka fuliyay fariisimo Alshabaab Ku lahaayeen Gobolka Mudug.
Hawlgalkaan oo dhacay saaka waabarigii ayaa Daba socday weerar kale oo isla shalay Ka dhacay isla nawaaxigaas.
Goobta uu hawlgalku Ka dhacay waxeey Ka tirsantahay Degmada Xarardheere ee Gobalka Mudug.
Alshabaab ayaa saldhigaan Ka abaabulayay Weeraro Ka dhan ah Shacabka Soomaaliyeed waxaana loo gaystay waxyeelo baahsan oo lagu Kala dhantaal qorshahooda gurracan.
Weerarkaan waxaa lagu dilay Saraakiil iyo Maleeshiyaad Ka tirsan shabaab mana jirto waxyeelo soo gaartay shacabka.
Tani waxeey muujinaysaa sida Ciidamada Qaranku awood ugu leeyihiin in ay Ku beegsadaan shabaab goob kasta oo ay Ku suganyihiin iyo sida kooxdu ay ugu nugushahay in talaabo looga qaado goobkasta oo Ka Ku dhuumaalaysanayaan .
Previous articleFinance Ministry Under Scope As $42 M Is Unaccounted
Next articleMadaxweyne Muuse Biixi oo u hanjabay Farmaajo iyo Kheeyre
Iskuulo Loo Xiray Cabsi Laga Qabo Weeraro Ay Ka Geeystaan Ururka...